Barcelona Oo Doonaysa In Ay Tottenham Ku Guulaysato Champions League | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Barcelona Oo Doonaysa In Ay Tottenham Ku Guulaysato Champions League
Waxa maanta si weyn loo sugayaa kulanka xiisaha leh ee Finalka tartanka champions League xilli ciyaareedka 2018/2019 kaas oo dhex mari doona kooxaha Liverpool iyo Tottenham.
Finalka ayay isaga hor iman doonaan laba kooxood oo premier League ah sidaas darteed waxa jira kooxo badan iyo xiddigo badan oo adduunka ah oo kala taageeri doona labada kooxood marka la yimaado taageerayaashooda khaaska u ah labada kooxood.
Kooxda Barcelona ayaa ah kooxda sida weyn u taageeri doonta kooxda Tottenham waliba doonaysa in ay Tootenham kooxda Liverpool ka qaado koobka champions League xilli ciyaareedkan.
Hadaba waxa aan halkan ku soo bandhigi doonaa 3 sababood oo ay Barcelona u rajaynayso in ay Tottenham ku garaacdo kooxda Liverpool koobka.
Si aan loo buun-buunin ama loo sii hadal hayn soo laabashadii ay Liverpool samaysay kulankii lugta 1-aad ee Semi-finalka tartanka champions League Barcelona ayaa doonaysa in ay Tottenham ku guulaysato koobka hadii ay sidaas dhacdo waxa si dhib yar loo iloobi doonaa soo laabashadii Liverpool samaysay kulankii Barcelona uguna soo baxday Finalka champions League.
2.Abaalmarinta Ballon d’Or-ka:
Marka loo eego in uuna haatan jirin xiddig ku dhawaa xiddiga Lionel Messi kaas oo ku guulaystay xiddiga ugu goolasha badan horyaalka La Liga, 5-ta horyaal ee ugu waaweyn iyo waliba gool dhalinta Champions League, ku guulaysiga champions League ee Liverpool ayaa keenaysa in ay xiddigaha Mohamed Salah, Sadio Mane iyo Virgil Van Dijk si xoogan Messi ugula tartamaan abaalmarinta Ballon d’Or maadama loo eegi doono champions League.
Laakiin hadii ay Tottenham ku guulaysato champions League Lionel Messi ayaa meel cidla ah la mari doona baalmarinta Ballon d’Or-ka sanadkan marka loo eego in ayna Tottenham joogin xiddigo is muujiyay xilli ciyaareedkan.
Ku guulaysiga Tottenham ee champions League ayaa la macno ah in ay ku guulaysan doonaan markii ugu horaysay taariikhooda halka ku guulaysiga Liverpool ay la macno tahay in ay Liverpool dhaafi doonto Barcelona dhanka koobabka ugu badan champions League oo ay haatan haystaan min 5 koob laakiin Reds ayaa 6 ku guulaysan karta hadii ay kor u qaado koobka caawa sidaas darteed Barcelona ayaa doonaysa in ayna sidaasi dhicin oo ay Tottenham ku guulaysato koobka.